တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ပိုးကူးဆက်နေသူတွေရဲ့ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက် ရောဂါ လက္ခဏာများ ~ Myanmar Online News
တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ပိုးကူးဆက်နေသူတွေရဲ့ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက် ရောဂါ လက္ခဏာများ
11:02 PM ကျန်းမာရေး, နိုင်ငံတကာသတင်း No comments
ရာသီ ပူလိုက် အေးလိုက်ဖြစ်လို့ သမံ ဖျားနာတာမျိုးတွေ ရှိသလို သေမင်းတမံ ဝူဟန် ဗိုင်းရပ်စ် ဆိုင်ရာ ပိုးမိသားစု (၇)မျိုးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ2019-nCoV လို့ ဆေးသုတေသီတွေက နာမည်ပေးထားပါတယ်။ဒီပိုးဟာ လည်ချောင်းကနေ တဆင့်ကူးဆက် ခံရတာများပါတယ်။ပထမ အဆင့် သုံးလေရက်ခန့် (၁) လည်ချောင်းချောက်ကပ်လာပါတယ်။
•About the symptoms of the pneumonia caused by Coronavirus:
ကိုရိုနာ ပိုသစ် ဟာ အကြမ်းဖက် သမားတွေ ပုံစံမျိုး ကိုယ်တွင်းက ခုခံအားနည်းတဲ့ နေရာတွေကို ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီး တိုက်ခိုတ်ပါတယ်။ပုံမှန်အဖျားက ဆေးထိုးသောက်ရင် ရက်ပိုင်းအတွင်းပျောက်သွားပါတယ်။ ဒီပိုးရှိနေပြီဆိုရင် ချောင်းချောက်ဆိုးတာမပြောက်- အဆုတ်ရောင်တာပါ ဆက်ဖြစ်လာပါတယ်။ ကိုယ်တွင်းက အဆုတ်ကို ပိုးတွေက သိမ်းပိုက်ပြီး အဆမတန် မျိုးပွားလာကြပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ နှာရည်ရိုတာ-အဖျားတက်တာ- ချမ်းပြီးတုံလာတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဆေးဝါးမပြည့်စုံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုသမပေးနိုင်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့(ဓါတ်ခွဲစမ်းသတ်ခန်း အဖြေနှစ်ရက်ကြာမှသိရမည်) ကိုရိုနာရောဂါကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိနိုင်သလို..... ဟယ် ရုတ်တရက်သေတာ -လေဖြတ်တာ-နှလုံးရောလေ....
အဆုတ်ရောင်တာပေါ့ လို့ အရပ်စကားနဲ့ ထင်ကြေးပေးပြီး ပြီးသွားကြမှာပါ။
3. With pneumonia, comes high fever and difficulty in breathing. The nasal congestion is not like the normal kind. You will feel like you are drowning in water. It is important to go seek immediate medical attention if you feel like this.
အဆိုးဆုံးက အဆုတ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ ပိုးတွေ သောင်းကျန်းလာရင် အသက်ရူရခက်ခဲ ရင်ဘတ်အောင့်တာတွေခံစားရမယ်၊ ရေနစ်နေသူတဦး အသက်ရူမရတော့သလို မျိုးခံစားရပါလိမ့်မယ်။အသက်ကိုရိူက်ရိူက်ရူရင်း အသက်ရူကြပ်ပြ ရုတ်တရက်လဲကျသွားမှာဖြစ်တယ်။ဟယ်အကောင်းကြီးရယ်....ကြည့်စမ်း.. ဆေးရုံတင်ပြီးမကြာခင် သေဆုံး တာ- လမ်းမပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ရင်းလဲကျသေဆုံး... ကားစီးရင်းသေဆုံးနေတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ အရပ်ထဲမှာ များလာနေပြီဆိုရင် ..ရောဂါပြန့်နေတဲ့ အန္တရယကိုဘယ်လိုကာကွယ်ကြပါဆိုတဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံတွေ အွန်လိုင်းမှာပြန့်နေလို့ မရေးလိုတော့ပါ။
Source - SAW